ဥပဒေ | Danya Wadi
By danyawadi November 23, 2019 Leaveacomment
၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ – 1982 Myanmar Citizenship Law
By danyawadi November 22, 2019 Leaveacomment
By danyawadi November 16, 2019 Leaveacomment
၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဥပဒေ
By danyawadi November 1, 2019 Leaveacomment
၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဥပဒေအမှတ် (၃၀/၂၀၁၉) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော “၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ” အား ပြည်သူများ သိရှိလေ့လာနိုင်ပါရန်
လျောစပီကာ အသံခြဲ့စကျတှကေို နားမခံနိုငျအောငျ ဖှငျ့နရေငျ တိုငျသညျဖွဈစမေတိုငျ
By danyawadi October 29, 2019 Leaveacomment
Zawgyi လော်စပီကာ အသံချဲ့စက်တွေကို နားမခံနိုင်အောင်ဖွင့်နေရင် တိုင်သည်ဖြစ်စေမတိုင်သည်ဖြစ်စေ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ News Video- DVB TV Unicode လျောစပီကာ အသံခြဲ့စကျတှကေို နားမခံနိုငျအောငျဖှငျ့နရေငျ တိုငျသညျဖွဈစမေတိုငျသညျဖွဈစေ ရပျ/ကြေး အုပျခြုပျရေးမှူးတှကေ တာဝနျယူဆောငျရှကျပေးရမှာဖွဈတယျလို့ ပွညျထောငျစုရှနေ့မြေားနှငျ့ ဥပဒအေထောကျ အကူပွုသူမြားအဖှဲ့ကပွောပါတယျ။ News Video- DVB TV
By danyawadi October 16, 2019 Leaveacomment
နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အ​ရေးဥပ​ဒေကို ​လေ့လာသူများအတွက် မြန်မာဘာသာ ဖြင့်လွယ်ကူစွာ​ဖတ်ရှု​လေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အ​ရေး ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ စာမျက်နှာ​ပေါင်း ၆၇၈ မျက်နှာဖြင့်အခန်းကဏ္ဍစုံလင်စွာပါဝင်​သောနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အ​ရေးဥပ​ဒေကို ဘာသာပြန်ဆိုထား​သောစာအုပ် အား နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အ​ရေး​လေ့လာသူများအတွက် EYULIC မှ လွယ်ကူစွာ Download ရယူနိုင်ရန် ​ဖော်ပြ​ပေးလိုက်ပါတယ်……. Download Link – Click to access OUP%20-%20Rhona%20Smith_%20IHRL_Final%20print_MM.pdf (မှတ်ချက်။ ။ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေ ရှစ်ကြိမ်မြောက်တည်းဖြတ်ခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဘာသာပြန်ဆိုမှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဒိန်းမတ်-မြန်မာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး စီမံကိန်း မှ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော စကားလုံးအမှားများ၊ စကားလုံး ချန်လှပ်ထားရခြင်းများ၊ စကားလုံးအကျများသည် အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ […]
By danyawadi May 27, 2019 Leaveacomment
လောင်းကစားဝိုင်းတွေကို စီးပွားဖြစ် သတင်းပေးပဲ လုပ်တော့မယ်…. လောင်းကစားဝိုင်းတွေ ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် သတင်းပေးရုံနဲ့ သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ တန်ဖိုးရဲ့ (၁၀)% တရားဝင်ရရှိမယ် (သို့မဟုတ်) ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် (၂၀)% ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိမယ်။(သတင်းပေးသူအမည်ကိုလျှို့ဝှက်ထားရမည်) မြို့နေရပ်ကွက်တွေမှာ လူအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ လောင်းကစားပြုလုပ်ရင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ(Casino) ကာစီနိုကစားခွင့်မရှိပါ။ ကျေးရွာအတွင်းမှာ(သို့မဟုတ်)ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ လောင်းကစားမှုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုးကိုယ်တိုင် ၀ရမ်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ……….. ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်-၁၃ လောင်းကစားဥပဒေ ယနေ့ အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ MoeHein ခရီးသည်
By danyawadi February 24, 2019 Leaveacomment
စောဒကနှင့်အဖြေများ-အပိုင်း ၂ *************************** မေး ။။ရိုဟင်ဂျာ(ခ) ရခိုင်ပြည်က မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းသည်နိုင်ငံမဲ့ (Stateless) ဟုတ်သလား? အဖြေ။ ။ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ Status ကဘာရှိလဲဆိုတာဥပဒေကြောင်းအရကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေ တဲ့လူတွေ၊မွေးတဲ့လူတွေ၊အစဉ်အဆက် နေထိုင်တဲ့လူတွေကို ၃-မျိုး ၃-စားခွဲပြီးတော့အရင်အစိုးရလက် ထဲမှာဥပဒေကြောင်းအရ စိစစ်ခဲ့ပါပြီး။(၁)-FRC=Foreign Registration Card @ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်သူ များ၊ ၁၈၆၄ခုနိုင်ငံခြားသား များ အက်ဥပဒေရှိတဲ့။ ၁၉၄၀-နိုင်ငံခြားသား များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပြဌာန်းတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၄၈-ခု နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်း ဥပဒေပြဌာန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှနိုင်ငံခြားသား များအားလုံး မှတ်ပုံတင်ပြီးနိုင်ငံခြားသား ကပ်ပြား FRC-ကပ် ဂဏာန်း ၅-လုံးပါတဲ့ ကပ်ပြားပေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေက နိုင်ငံခြားသား (FRC-ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ) ဘိုးဘွား၊ မိဘ တွေဆီက ဆင်းသက်လာတာ မဟုတ် […]